သိလိုပါသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သိလိုပါသည်။
Posted by Ma Ma on Nov 18, 2010 in News |6comments
ဒေါ်စုက ပဏ္ဍိတာရာမဆရာတော်ကြီးဆီသွားဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘာတွေမေး ဘာတွေပြောကြလဲ သိသူတွေ သိသလောက် တင်ပေးစေချင်ပါသည်။
ဒေါ်စုက အရှင်ဘုရား ဟုပြောပါသည်။ ဆရာတော်က ဒကာမကြီးဟု မိန့်ပါသည်။ ကျန်တာတော့ မသိပါ။ သိသူများ ပြောကြပါရန်။
ကိုကြောင်ကြီး @ ကိုကြီးကြောင် ပြောသလို အရင်ဆုံး နှုတ်ဆက်ကြမှာတော့ သေချာတရ်။
ဘာပြောကြတာလဲတော့ အာဖျံကွီး မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အာဖျံကွီး ထင်တာကတော့ တရားအကြောင်းဆွေးနွေးကြလိမ့်မရ်။ ပဏ္ဍိတာရာမဆရာတော်ကြီးဆိုတာကလဲ လောကီကိစ္စတွေမှာ ၀င်မပါပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်း။ သီလသမာဓိပညာနဲ.လဲ ပြည့်စုံတရ်။
ဟော … အာဖျံကွီးတို.ရဲ. ချစ်လှစွာသော အမေစုကိုလဲ ကြည့်လိုက်အုံး။ မိသားစုဆိုတာကလဲ အဝေးမှာ၊ တွေ.ချင်လို. တွေ.ခွင့်မရ၊ နေရတာက အဖိနှိပ်ခံဘ၀နဲ. အကျယ်ချုပ်၊ ကိုယ့်အသက်ကို ကိုယ်မပိုင်တဲ့အဖြစ်နဲ.၊ မိသားစုအပူအပြင် မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားတွေရဲ.အပူတွေကိုလဲ ထမ်းထားရတဲ့သူ။ သူ.နေရာမှာ သာမန်မိန်းမ တစ်ယောက်ဆိုရင် ရူးသွားမရ်။ သာမန်ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဆိုရင်လဲ ရူးသွားနိင်တရ်။ အဲဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ဖယ်ထုတ်ထားဖို./မေ့ထားဖို. တရားအသိရှိဖို.လို.တရ်။ အာဖျံကွီးသေချာပြောရဲတရ် … အမေစုမှာတရားအသိရှိတရ်။ ဒါကြောင့်မို. သူခံနိင်ရည်ရှိတာလေ။ ဒါကြောင့်မို. လွပ်လွပ်လတ်လတ် သွားလို.ရတဲ့ အချိန်မှာ ပဏ္ဍိတာရာမဆရာတော်ကြီးနဲ. လာတွေ.တာဖြစ်ပါလိမ့်မရ်။ (သို.ဖြစ်ပါသောကြောင့် နိင်ငံရေး၊ ယတြာရေး ကိစ္စလို. အထင်မမှားကြပါရန်)
ဒီက ဆရာတော်နဲ့ယတြာချေတယ်မှတ်လို့အဲ့လိုဟုတ်ဝူးလား
HIV ဝေဒနာရှင်တွေဆီသွားတာကြတော့မေးဘဲနဲ့ 
ပြောလိုက်ကြပါ တီတီစု ကို ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် ဆင်ခြင်ပါလို့ 
ကိုဇာဂနာပြောသလို တီတီစုကို ဂရုတစ်စိုက် အရိပ်တကြည့်ကြည့်တွေများတယ်လို့ 
အမှန်ဆုံးအဖြေပေးတာကတော့ အမောင်ကြောင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖျံကွီးရဲ့ (နိုင်ငံရေး၊ ယတြာ) လမ်းလွှဲကို မလိုက်ကြပါနဲ့။ ဆွေးနွေးကြတဲ့ တရားကိုဘဲ သိချင်တာပါ မိုက်ကယ်ပု။
ဒုက္ခပါပဲ ဒေါ်မမရယ် … ဘယ်သူက လမ်းလွှဲနေလို.လဲ … သူ.ပို.စ်မှာဖြင့် ဘာမှလဲမရေးထားပဲနဲ.၊ သေချာဖတ်ပါအုံး … အာဖျံကွီးရေးထားတာကို။ ဆွေးနွေးတဲ့ တရားအတိအကျကို သိချင်ရင်တော့ ပဏ္ဍိတာရာမကျောင်းတိုက်ကိုသွား … အခွေဝယ်လို.ရတရ်။ လိပ်စာမသိရင်ပြော။ ပေးလိုက်မရ် ဒီက။
အန်တီစုက သူများတွေလိုဥာဏ်နီဥာဏ်နက်ကလိမ်ဥာဏ်တွေသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကံကံဧ။်အကျိုးကို ယုံကြည်သူပီပီ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်မရောက်ခဲ့ရတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားပြီး ရှိခိုးစည်းကပ်ကုသိုလ်ယူတာပါ ။